စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ စျေးပေါဥရောပခရီးစဉ်ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဥရောပမှာခရီးသွားဧည့်ကြီးမြတ်ကော်ဖီဆိုင်များအနေဖြင့်လှပသောကမ်းခြေမှအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်. ဗင်းနစ်နဲ့တူမြို့ကြီးများ၏ရလဒ်အဖြစ်, ရောမမြို့, နှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏ပဲရစ်သန်းပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဥရောပခရီး. ကျနော်တို့စျေးအသက်သာဆုံးစာရင်းတစ်ခုဖန်တီး…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကမ်ဘာပျေါတှငျအရှည်ဆုံးမီးရထားခရီးအလွန်ရှည်လျားများမှာ! ဤရွေ့ကားခရီးရက်ပေါင်းများစွာ ယူ. မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဖုံးကိုလို့ရပါတယ်. ဒါကြောင့်, ဤနေရာတွင်ဥရောပတိုက်တွင်အရှည်ကြာဆုံးယူသောခရီးများမှာ, အာရှတိုက်, သြစတြေးလျ, နှင့်အမေရိကန်. ဤဆောင်းပါးသည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…
3 ဥရောပမြို့ကြီးများအကောင်းဆုံးရထားဖြင့် Visited
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပ၌ဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးဘာ, ထိုသူအပေါင်းတို့သွားရောက်နိုင်အောင်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်. ရထားလမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာဤအရေပုံး-စာရင်းနေရာများကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒီမှာပါ3အကောင်းဆုံးရထားလည်ပတ်ခဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများ. ဤဆောင်းပါးသည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမျိုးစုံ Modes သာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုနှိုင်းယှဉ်ရထားခရီးသွားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အရာ mode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်? ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာ, ကျနော်တို့ကဘက်လိုက်တယ်၊ ရထားခရီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ Bernina Express သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးရထားခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, Dombas မှ Andalsnes သို့ Rauma လိုင်းတွင် (နော်ဝေ), သငျသညျမြင့်ထိပ်၏အမြင်များကိုခံစားနိုင်ပါတယ်. ထို့အပွငျ, သင် Rauma မြစ်ကိုဖြတ်သန်းသောအခါသင်သည်တောင်စောင်းနှင့်ကုန်းပြင်မြင့်များကိုတွေ့နိုင်သည်….
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်မိသားစုများအတွက်အားလပ်ရက်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သူငယ်ချင်းစုံတွဲသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု, ကသဘောတူရန်လူတိုင်းရဖို့မကြာခဏခက်ခဲမယ့်. အရာတစ်ခုမှာသူကအပေါ်သဘောတူရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်, သို့သော်, ကားငှားသို့မဟုတ်ရထားသွားကြဖို့ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်. ရထား tripping သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာပါပဲ…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပ၌ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာကျွန်တော်အမြဲသင်တို့အဘို့တန်ဖိုးနည်းရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေနေကြသည်. ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုတယ်တွေ၊ လှပတဲ့ရထားခရီးစဉ်တွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့်မီးရထားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေတ်အစားဆုံးခေါင်းစဉ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သက်သာခံစားရ, စတိုင်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံမိုးသည်းထန်စွာအိတ်မလိုပါ. ဤတွင်အီတလီနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးရထားခရီးစဉ်များအတွက်ထုပ်ပိုးဖို့ဘယ်လိုဖွင့်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်….